Mudo intee le'eg ayey ku qaadan doontaa barnaamijkaaga inuu ku hagaajiyo feylkayga? - DataNumen
Waxay kuxirantahay qodobadan soosocda:
Cabirka faylkaaga. Haddii feylkaagu weyn yahay, markaa waqti dheer ayay qaadan doontaa in la falanqeeyo maadaama barnaamijkeennu hubin doono oo falanqeyn doono baay kasta oo faylkaaga ku jira, taas oo ah mid waqti badan qaadanaysa. Tusaale ahaan, 100GB PST wuxuu caadi ahaan qaadan doonaa 10 + saacadood si uu u dayactiro.
Kakanaanta faylkaaga. Haddii ay jiraan xog badan oo ay si iskumid ah u tixraacayaan faylkaaga, markaa badanaa waxay qaadaneysaa waqti dheeri ah oo lagu dayactiro. Tusaale ahaan, a SQL Server Faylka MDF oo leh miisas badan, tusmooyin, iyo waxyaabo kale ayaa caadi ahaan qaadan doona dhowr saacadood si loo dayactiro.
Nooca faylkaaga. Qaabab faylasha qaarkood ayaa si gaar ah u adag, oo u baahan waqti ka badan kuwa kale. Tusaale ahaan, AutoCAD DWG faylka waa adag yahay, sidaa darteed xitaa 5MB DWG faylka wuxuu qaadan karaa dhowr saacadood si loo dayactiro.
ilaa goormaan, waqti cunay
La daabacay May 15, 2021
Nooca buuxa ma soo kaban doonaa xog ka badan tii demo?Sidee loo cusbooneysiiyaa alaabteyda